Dhawunirodha WhatsApp ye iPhone yemahara, uzviwane pano! | IPhone nhau
Whatsapp ye iPhone
Whatsapp ye iPhone ihwo rudo-ruvengo hukama hwakawedzerwa pamusoro pemakore. Isu tinorangarira kuti WhatsApp yakadzika paIOS App Store kumashure muna 2010. Pakutanga, chishandiso ichi chaive nemutengo we € 0,99, uye nekuda kwekubhadhara, iwe wakatora mukana wekuti ungangoshandisa iyo application yehupenyu hwese. Nekudaro, pamusoro pemwedzi, Android yakave yakakurumbira sefuro, uye WhatsApp yakanga yatokura zvakakwana nekuda kwekubhadhara muApp Store kuti ikure muGoogle ndima. Saka zvaive zviripo, uye yakamhara paGoogle Play Chitoro neruzivo, yaive yemahara zvachose uye ndokuenda kune yegore kunyoreswa nzira ye € 0,99.
Chaizvoizvo iyo Android nzira yaive yakanyanya kudhura mukufamba kwenguva, uye yakaguma ichiwedzera kusvika kuIOS futi, kunyangwe kwenguva pfupi. WhatsApp yakangotora gore ichichengetedza kunyoreswa kwe € 0,99, kunyanya kusvika Facebook yatora muridzi wayo. Kubva ipapo WhatsApp yakasununguka zvachose pamapuratifomu ese.
Asi kwete izvo chete, asi zvakare, WhatsApp ye iPhone yakwira kubva mumadota ayo, ichipora kubva pakusiya mukusimudzira kuti yanga ichitambura, ichiwedzera iwo mamwe mabasa kana kunyangwe iwo atinowana semuenzaniso muApple. Nekuda kweizvi, iko kunyorera kuri kuwedzera kufarirwa, izvo vazhinji vasingazive ndizvozvo WhatsApp yakazvarwa pa iPhone, uye inokwereta kubwinya kwayo kwese kuApple mafoni.
1 Dhawunirodha WhatsApp ye iPhone mahara
2 Maitiro ekuvandudza WhatsApp pane iPhone
3 Nyowani WhatsApp manzwiro eApple
Dhawunirodha WhatsApp ye iPhone mahara
WhatApp ye iPhone yakasununguka zvachose, Hapana mubvunzo mune izvi, uye ndeyekuti inonyanya kufarirwa meseji mutengi pamusika, yakava yemahara yemahara chikuva mushure mekuwanikwa neWhatsApp. Uye kwete izvo chete, asi zvakare yakura mumabasa, ikozvino isu tinogona kufona neWhatsApp, kutumira PDF uye .docx mafaera, uye kusvika kwevhidhiyo mafoni anotarisirwa mukati megore rino 2016 kuenda kuWhatsApp ye iPhone.
Nekudaro, iOS ichiri yakati sandara chikuva, nekudaro, yega yazvino sarudzo kuisa WhatsApp ndiyo App Store. Kuwana iyi link unogona kudhawunirodha WhatsApp ye iPhone zvachose mahara. Zvakare, iyo app inogara iri pamusoro gumi yegumi yemahara hits chikamu paApp Store. Kubudirira kwayo kunokura nekukura nekufamba kwenguva, uye zvigadziriso zveWhatsApp, zvakaita seyakakurumbira "bugifxes", usamire kuitika pakuvandudza.
Maitiro ekuvandudza WhatsApp pane iPhone
Kune vashandisi veIOS, kugadzirisa WhatsApp ye iPhone Zvichava zvakajairika, kugadzirisa zvese zvinoshandiswa pa iPhone nhema pane imwecheteyo system. Iyo epicenter yekushandisa muIOS ndiyo App Store, nekudaro, yekutanga yematanho atinofanira kutora kuti tione kana tiine chekugadzirisa enda kuApp Store.
Muchikamu chezasi kurudyi, tinowana sarudzo ye "zvinyorwa"Kana tangodzvanya pairi, runyorwa ruchaonekwa nezvose zvinyorwa zvekushandisa izvo zvatinazvo, tinogona" kugadzirisa zvese "kana kusarudza imwe neimwe yatinoda kugadzirisa uye ndeapi asina. Kana tikasangana WhatsApp yekuvandudza pane iPhone, isu tinongofanirwa kuimanikidza.
Nekudaro, muchikamu chegadziriro ye iPhone, kana tichienda kuApp Store, tichava nesarudzo yeku otomatiki kurodha pasi uye nekuisa zvigadziriso yekushandisa.
Nyowani WhatsApp manzwiro eApple
Kuuya kweIOS 10 uye iyo nyowani emoji kurongedza inokanganisa WhatsApp mune yega yega yekuvandudza, uye nyowani WhatsApp mamirioni e iPhone anotibvumidza isu kupfuudza manzwiro edu zvakanyanyisa. Imwe yevanotarisirwa vanosvika kune iyo WhatsApp emoticon pack ye iPhone ndiyo paella.
Kune rimwe divi, tichava nechingwa chechingwa, gorilla uye kunyangwe chipembere. Kuenzana kwevakadzi kunoratidzwa zvakafanana mu iwo matsva eWhatsApp emanzwiro e iPhone, uye tinokwanisa kuona varume vane korona. Kune rimwe divi tine emoji inosekesa iyo inoridza mhino dzako nechando, pamwe neemoji yakasimudza marutsi, chimwe chinhu icho vazhinji vedu tave tichida kushandisa kubva pakufa kwaMSN Messenger, uye izvo zvinosvika pakupedzisira paWhatsApp ine iOS 10 kubva munaJune we2016, iine iOS 10 betas.